Luigi Shoot Zombie - Online
နေအိမ် » shooting » Luigi Shoot Zombie
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Luigi Shoot Zombie
ဖေါ်ပြချက်: ဒါဟာယခုအခါမှိုင့်နိုင်ငံတော်ကိုကယ်တင်ရန်ရှိသည်သောသူတို့အမာရီယိုနှင့် Luigi မဟုတ်ကြောင်းပုံရသည်။ သူ့သေနတ်တွေနဲ့ရှုခင်းကိုဖြတ်ပြီးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားကြသည်သမျှသောဖုတ်ကောင်အနိုင်ယူဖို့ကိုကူညီပါ။ သူတို့အရိုးကိုလှည့်ဖုတ်ကောင်ဆန့်ကျင်ပစ်
ကစား: 40,292 tag ကို: Mario ဂိမ်းတွေ, Super Mario, Mario, Super Mario ဂိမ်းတွေ, luigi, luigi games, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဂိမ်း
ဖျက်ဆီးဘောလုံးနှင့်အတူတက္ကဆက်ပြည်နယ်သို့ကျူးကျော်ခဲ့ကွောငျးဖုတ်ကောင်ဖြိုချကိုကူညီပါ။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်များတွင် zombie ဖြိုချ4ကျူးကျော်ပျော်စရာရူပဗေဒပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖန်တီးရန်တိကျလှုပျရှားမှုမှာကိုဖျက်ဆီးဘောလုံးစတင်ရန်။ ဘောလုံးများစွာကိုအမျိုးအစားရှိပါတယ်
ပြိုင်ကားကားအတွက်, ဒီယေဂိုကရှောင်ရှားဖို့သူ့ကားကိုမောင်းနှင့်အကြွေစေ့စုဆောင်း, လမျးပျေါပစ္စည်းများအားဖြင့်အားလုံးဖုတ်ကောင်လွန်ဖို့ရှိသည်။ ခုန်ရန်မောင်းထုတ်ရန်မြှားသော့, အာကာသ bar ကိုအသုံးပြုခြင်း
zombo buster မြင့်တက်
ကျနော်တို့ဖုတ်ကောင်များကဆောင်ခဲ့သောကြောက်မက်ဘွယ်သောအနာရောဂါမှတပြင်လုံးကိုမျိုးဆက်နှင့်ဂြိုဟ်ကယ်ဖို့အဆင်သင့်သောပုဂ္ဂိုလ်, ရှာကြ၏။ သူတို့ကပင်သူတို့ထဲကတစ်ဦးမှလူအားလုံးကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရိုက်ကူးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်သွား!
Super Mario ခုန်ကြယ်ပွင့်
မာရီယိုဤနေရာသို့သွားရန်စတား: မာရီယိုဤနေရာသို့သွားရန်စတား: သင့်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကို Select လုပ်ပါနှင့်သူ့ကိုအဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သလောက်ပြေးခုန်ဖို့ကိုကူညီပါ, ဒင်္ဂါးပြားနှင့်ကြယ်စုဆောင်းနှင့်လုံခြုံစွာ finish ကိုအမှတ်ရောက်ရှိဖို့။
သင့်ရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့မောင်း & ဖုတ်ကောင်ထွက်ယူပြီးအားဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ဘို့ငွေရှာ။ လောင်စာအဆင့်ကိုသတိပြုပါ!
သင်သည်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်သမျှသောဖုတ်ကောင်သတ်ပစ်ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဂိမ်း။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်သေနတ်ယူပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အလွန်သတိထားနဲ့စေ့စေ့နားထောင်ကြလော့ ကံကောင်းပါစေ!
ဒါကစူပါမာရီယိုဂိမ်း၏အခြားဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ကမ္ဘာသစ်မှာ Mario စွန့်စားမှု, အကျွမ်းတဝင်ပိုက်ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့မစ်ရှင်အတားအဆီးမှတဆင့်မာရီယိုစီး moto ကူညီခြင်းနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါကစားသမားဆွာရက်ဇ်ကဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာထပ်လယ်ပြင်ကိုယူ။ ဒီအချိန်သူဖုတ်ကောင်သို့သူတို့ကိုငါဖွင့်ဖို့အားလုံးကစားသမားကိုကိုက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။ လယ်ပြင်ပေါ်အမြန်ကိုက်အပေါင်းတို့နှင့်အတူကစားသမား Be နှင့်လုံခြုံရေးအားဖြင့်အားကစားကွင်းထိဖို့မသတိပြုရကြမည်
မာရီယိုကမ္ဘာ့ဖလားသူသည်ဤအံ့ဆဲဆဲ treath ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါမိုဃ်းကောင်းကင်ကျူးကျော်ဖျက်ဆီးဖို့အကြောင်းပါ။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတိုင်းခြေလှမ်းနှင့်အတူရှေ့ဆက်တည်ရှိသည်ဘယ်မှာဒီမော်ကွန်းစစ်တိုက်ရာတွင်သူ့ကို Join ။ ဒါ့အပြင်လာသောလြှို့ဝှကျရနျသူတို့အဘို့အအနီးကပ် Watch
အားလုံးအချိန်ရဲ့နာမည်ကြီးပြိုင်ဘက်နှင့်အတူတစ်ပျော်စရာပြည့်ဝပြိုင်ကားဂိမ်းခံစားပါ။ မာရီယို, မြည်းဟောင်ကောင်နှင့် Bowser အချင်းချင်းယှဉ်ပြိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့ဖန်စီကုန်တင်ကားများ၏မောင်းနှင်ထိုင်ခုံပေါ်ယခုဖြစ်ကြသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်အံ့သြဖွယ် 10 အဆင့်ဆင့် Play နှင့်စစ်မှန်သောဆုရှင်ဖြစ်လာ။
အဆိုပါမင်းသမီး Bowser နှင့်သူ၏တပ်မတော်အားဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိသည်။ မာရီယိုကိုမကောင်းသောအလက်မှမင်းသမီးကယ်တင်ရန်နည်းလမ်းရှာရန်လိုအပ်ပါသည်။ မာရီယိုသည်သူ၏စူပါသေနတ်နှင့်အတူတက်လက်နက်နှင့်မင်းသမီးကယ်တင်ရန်တစ်ဦးစွန့်စားမှုအပေါ်သွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Mario ရှိသမျှကိုမိကျောင်းကိုသတ်ကူညီပါနှင့်မင်းသားရ
ဒီလူဆိုးစာရင်းကဲ့သို့သောနယ်ပယ်အခြေပြုသေနတ်သမားအတွက်ဖုတ်ကောင်များ၏အဆုံးမဲ့အလုံးအရင်းပယ် Fight ။ ဖုတ်ကောင်များကဖွင့်ကျော်တစ်ဦးအာကာသစခန်း Explore, ဝယ်လက်နက်များအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်၏စစ်တိုက်၌သင်တို့ကိုကူညီမှစူပါစစ်သားများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စုဝေး။ သငျသညျအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကြာရှည်လိမ့်မည်နည်း
အပင် vs ဖုတ်ကောင်ခရစ်စမတ်
Zombies ခရစ္စမတ် vs အပင်! ပိုများသောဖုတ်ကောင်ခရစ္စမတ်နေ့တွင်လာကြ၏။ Peashooters အပေါငျးတို့အဝင်ဖုတ်ကောင်သတ်ပစ်ရန်ကိုကူညီပါ။
ညီအစျကိုမာရီယိုနှင့် Luigi တိရိစ္ဆာန်၌ဤကမ္ဘာစွန့်စားမှု၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်အကူအညီလိုအပ်နေ၌ရှိကြ၏။ အသီးအသီးဇာတ်ကောင်စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားရန်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိကြောင်းသတိရပါ။
Mario စုံတွဲများ burnout
မာရီယိုနဲ့ယောက်ျားတွေ21 ရက်နေ့ကဆိုင်ကယ်သင်စက်ဘီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးသင်ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်မှုနှင့်အတူသူတို့၏ဖုန်စက်ဘီးပေါ်တစ်ရှုးစီးပြီးသွားကြသည်!
zombotron 2. အချိန်စက်
သငျသညျနောက်ဆုံးတွင်သင့်ရဲ့အာကာသယာဉ်ပြုပြင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် Zombotron ၏ဂြိုဟ်မှပျံသွားချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ရုတ်တရက်သင်သည်သင်၏လောင်စာကန်အချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသတိထားမိ - သငျအခြို့သောလောင်စာအဘို့အကြည့်ဖို့ဒါပေမဲ့ဘာမှရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ကြမ္မာသင်တို့အဘို့အအခြားအစီအစဉ်များ ... အဆိုပါရှိပါတယ်
အဆိုပါဖုတ်ကောင်မြို့တော်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြ, သာလူသုံးယောက်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အခုသူတို့အဖြစ်အစာရှောင်သူတို့လေးလံသောစစ်တပ်ကထရပ်ကားနှင့်အတူစက်သေနတ်များနှင့်အခြားအန္တရာယ်များ toyw နှင့်အတူလက်နက်ပါနိုင်ပါတယ်အဖြစ်သွားကြတာပေါ့။ သငျသညျသူတို့ကိုပယ်ရဖို့ကူညီပေးမလဲ
Mario ATV ပြိုင်ဘက်
အဖြစ်တာကိုသင်လုပ်နိုင်အဖြစ်မာရီယိုနှင့်အတူ Run နှစ်ယောက်ရထားဘီးပေါ်မှာဤမျိုးနွယ်အနိုင်ရ။ Luigi နှင့် Yoshi မြေမှုန့်ကိုစားစေနှင့်ပထမဦးဆုံး finish ကိုလိုင်းဖြတ်ကူးဖို့ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူကောင်းသောဖြစ်ဖို့သတိရပါ။
Despicable Me 2013 ခုနှစ်, ဂိမ်း
စစ်တိုက်ရာရှေ့တန်းအပေါ်ဦးဒဏ်ရာရခြင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ခံရဖို့လိုအပ်လျက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့ minions ကယ်တင်ရန် Show ကိုအသင်းစိတ်ဝိညာဉ်သည်, သင့်ခေါင်းပေါ်မှာကျဆင်းသောဗုံးထိမှန်ခံရဖို့မသတိပြုရကြမည် ....
ကမ်ဘာပျေါမှာအကျော်ကြားဆုံးရေပိုက်သမားမာရီယိုဟာကြောက်မက်ဘွယ်သောသရဲခြောက်တဲ့အိမျတျော၌ပိတ်မိနေခဲ့အမည်ရှိသော။ သူ့ကို outta ရှိဘေးကင်းလုံခြုံရသံမှကူညီပါ! သင့်ရဲ့လမ်းအပေါ်ဒင်္ဂါးပြားများနှင့်အပိုဆောင်းဆုကြေးငွေကိုစုဆောင်းဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ ထိုသရဲတစ္ဆေသနေိုငျဖြစ်ကြောင်းကိုသတိရပါ, ဒါဖြစ်
စူပါမာရီယိုကဤဖုတ်ကောင်ဖျက်ဆီးဖို့သင့်ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ်အပေါင်းတို့, ဖုတ်ကောင်အနိုင်ယူဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြသရန်ရှိသည်များနှင့်မင်းသမီး Peach ကယ်တင်ရန်မည်သူငါတို့အဆှရေပိုက်သမားတစ်ဦးအစွမ်းသတ္တိအားပေးကြဖို့စိန်ခေါ်မှုအပေါ်ယူ